Igumbi elitofo-tofo elinomgangatho we-HUGE Terrace
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAngelo
Indawo enkulu yokonwabela iintsuku zakho ezinelanga zase-Apulian iya kuba seyakho. Igaraji yakho ingaphantsi nje kweflethi. Imiboniso yeTV oyithandayo? Sikufihlile: yonwabele iNetflix yethu simahla.
Ikhaya lethu lidibanisa isitayile kunye netekhnoloji kunye nesimanjemanje kunye ne-Italian touch. Ikhululekile, icocekile kwaye yanamhlanje, iya kuba yeyakho ngokupheleleyo ngexesha olikhethayo ukuhlala.
Ikhululekile, icocekile, kwaye yangoku, igumbi lethu liya kukumangalisa ngokuqinisekileyo. Awudingi kuzikhathaza ngalo naluphi na uhlobo loncedo; ukuhlala kwakho kuya kuba mnandi kangangoko kunokwenzeka!
Kukho ikhitshi eligcwele ngokupheleleyo elinazo zonke izinto ozifunayo. Umatshini wokuhlamba izitya uqukiwe!
I-terrace yethu yeyona ndawo ifanelekileyo yokulala kwaye uphumle, kwaye kutheni kungenjalo, wonwabele isidlo esimnandi nesimnandi sase-Apulian ngombono omkhulu.
I-air conditioning ibekwe kwindawo yokuhlala, kwaye ngenxa yeefestile zethu ezizimeleyo, uya kufumana umoya omtsha kuyo yonke indawo yendlu.
Uya kukuthanda ukuvuka kusasa kunye nevumba lokutya okuqhelekileyo kwe-Apulian kulungiselelwa umnyango olandelayo. Uninzi lweevenkile ezincinci zasekhaya, ezibonelela ngokutya okumnandi kunye nemveli zingaphantsi komgama wokuhamba.
Sifumaneka ngokupheleleyo kwiindwendwe zethu, siqinisekisa ukuba zihlala zimnandi, ziphumla kwaye zingenangxaki kwindawo yethu yokuhlala. Siya kufumaneka ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Siyavuya ukunika iingcebiso ngeyona misebenzi ibalaseleyo kunye neendawo esinokuzibona kwindawo. Uya kuba nezaphulelo ezininzi kwezona ndawo zibalaseleyo zedolophu ezikhethelwe iindwendwe zethu nje.
Sithetha isiTaliyane, isiNgesi, isiJamani nesiFrentshi.
Sihlala sijonge phambili ekubambeni abantu abakhulu. Qhagamshelana nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo!
Sifumaneka ngokupheleleyo kwiindwendwe zethu, siqinisekisa ukuba zihlala zimnandi, ziphumla kwaye zingenangxaki kwindawo yethu yokuhlala. Siya kufumaneka ngalo lonke ixesha lokuhla…